Ogaden News Agency (ONA) – Warsaxaafadeed ay JWXO ka soo saartey xadhiga Labada Saxafi ee Itobiya ay afduubtay
Warsaxaafadeed ay JWXO ka soo saartey xadhiga Labada Saxafi ee Itobiya ay afduubtay
Itobiya oo guuldoon ahayd waayadanba, ka dib markay si isdaba joog ah ugu fashilmeen goobaha dagaalka oo meel kasta lagu jabiyaya ciidankooda iyo kuwa maxaysatada ahee ay soo urursadeen ayaa been aan jirin faafisay oo ah inay dileen 15 ka mid ah CWXO markay afduubayeen labada saxafi ee u dhashay dalka Sweden. Baadhitaan dheer ka dib, waxay JWXO soo saartey bayaankan.
Waxay jabhadda ku bilowday war-saxaafadeedkaa in sheegashada Itobiya aanu waxba ka jirin ee ahaa inay dishay 15an ka mid ah CWXO oo la socday labada saxafi. Waxay jabhadda ONLF cadeysay in aanu jirin wax ciidankeeda ah oo lagu dilay iska horimaad la xidhiidha arintaa sidoo kalena aanu jirin Naftood-hurayaal ka mid ah CWXO oo lagu qabtay dagaalka ay sheegeen inay ku soo qabteen labada saxafi ee u dhashay dalka Sweden.
Xaqiiqada waxay tahay labada Saxafi iyo gadh-wadeenadii la socday in la weeraray iyagoon soo gaadhin Ciidankii ONLF ee sugayay. Afar ka mid ah gadh-wadeenadii la socday ayaan ilaa hadda la ogayn meel ay jiraan, waxayna Xarunta Dhexe ee JWXO aaminsan tahay in ragaasi ay ciidamada Itobiya laayeen. Sirdoonka JWXO waxay soo xaqiijiyeen in aanay ciidamada Itobiya iyo sirdoonkooda toona u kaxaysanin maxaabiis waxaan ka ahayn labadii saxafi.
Maamulka Itobiya waxay si dhab ah u ogaayeen in weerarkaa lagu soo qaaday saxafiyiinta iyo gadh-wadeenkii la socday uu dhibaato u gaysan doono nolosha dad madaniyiin ah. Sidaa darteed weerarkaa wuxuu ka dhigan yahay un hab argagixiso ah oo dawladda Itobiya ay ugu talagashay saxafiyiinta caalamka in aanay isku dayin inay arimaha ku tumashada xuquuqda aadanaha ee ka socda Ogadenya ay wax ka ogaadaan ama ka qoraan.
Waxay JWXO si dhab ah u ogaatay in maamul goboleedka Puntland ay siiyeen xog muhiim ah oo ku saabsan socdaalka saxafiyiinta taasoo u suurtagalisay inay si toos ah u weeraraan gaadiidkii waday labada saxafi. Sidaa darteed; maamulka Puntland wuxuu qayb ka yahay weerarka lagu qaaday saxafiyiinta iyo dhaawaca la gaarsiiyay. Waxay si dagdag ah uga xambaareen goobtii ay dadka ku laayeen labadii saxafi iyagoo ka cararayay inay soo gaadhaan ciidankii JWXO ee gurmadka u soo aaday goobta.
Labadaa saxafi marnaba rajo lagama qabo inay Itobiya si cadaalad ah u eegto maxkamadda ay sheegeen inay hor-keenayaan, waxayna JWXO rumaysan tahay in sababta arintaa ay ka dambayso rabitaanka Itobiya ee ah inay riwaayad ay ku tilmaanto maxkamad soo saarto labada saxafi si looga niyad jabiyo saxaafadda caalamka inay soo aadaan siday wax uga ogaan lahaayeen dambiyada xuquuqul insaanka ee ka socda Ogadenya. Waxaana marag cad u ah arinta inay sidaa tahay; eedeynta aan waxba ka jirin ee saxafiga Johan Persson ay ku eedeeyeen inuu saddex jeer oo hore si qarsoodi ah u soo galay Itobiya oo mid ka mid ahaa socdaaladaa la qabtay oo laga masaafuriyay dalka. Xaqiiqadana waxay tahay saxafiga ay masaafuriyeen waa Jonathan Alpeyrie oo ah Ameerikaan. Arintan waa ku talagal loola jeedo in dambi looga dhigo saxafigaa sharafta leh ee aan wax dambi ah galabsan aan ka ahayn inuu doonayay inuu xaqiiqada ka jirta Ogadenya soo ogaado.
ONLF waxay markale ka codsanaysaa mujtamaca caalamka inay cadaadis ku saaraan Itobiya in si dhaqsa leh loo soo daayo saxafiyiintaa si ay ugu tagaan reerahoodii. Waxaa kaloo ay ONLF ka codsanaynaa saxafiyiinta xorta ah inay runta raadiyaan oo aanay ka ogolaanin maamulka ka jira Itobiya cunaqabataynta uu saaray Ogadenya.
Ugu dambayn; waxay JWXO ka codsanaysaa saxafiyiinta caalamka inay taageeraan jaalayaashooda oy go’doomiyaan wararka dacaayadda ah ee xukuumadda Itobiya ilaa ay ka sii daynayaan saxafiyyinta ay afduubeen.
Halkan ka dhagayso Wareysigii VOA ee Afhayeenka JWXO mudane Cabdiqaadir Hirmooge (Cadaani).